Munoenda kuCírculo de Lectores, mabhuku pamba kubvira 1962. | Zvazvino Zvinyorwa
Círculo de Lectores yakakundwa nemakambani anokwanisa kutora bhuku chero papi peninsula mumaawa makumi maviri nemana.
Iyo tekinoroji inoshandura nzira yatinoona nayo nyika uye maitiro edu hachisi chakavanzika. Kuti izvi zvinokanganisa misika kana. Uye ikozvino yave nguva yekufarirwa kwevakawanda Círculo de Lectores.
Iyo kambani, yakavambwa muna 1962 uye yakawanikwa naGrupo Planeta makore mashanu apfuura, yanga iri mukurasikirwa kweanoda kusvika makore gumi.
Kuedza kuponesa kambani mumakore achangopfuura nekusanganisa zvigadzirwa zvitsva zvaive zvisina chekuita nemabhuku, bhizinesi modhi rakapera: dambudziko raive risiri zvigadzirwa zvakapihwa asi yemhando yekutengesa. Catalog yekutengesa haisisina musoro munharaunda inogara yakabatana neinternet uye ine hunyanzvi hwekugona iyo inogona kutora maodha chero papi peninsula mumaawa anopfuura makumi mana nemasere pasina kunetseka.
Nezuro, Mbudzi 6, iyo yekutengesa network yeCírculo de Lectores, inoumbwa nevazhinji vevapenheni vakagovera mabhuku nezvitoro zvekutengesa kudzimba dzevaverengi, zvakamiswa. Musiyano nemamwe mapuratifomu ekutengesa mabhuku paInternet? Círculo deLectores yakapa kugoverwa kamwe chete pamwedzi uye zvimwe zvacho (Amazon, Fnac, Casa del Libro…) pakarepo. Tiri kurarama munguva umo kukurumidza kwebasa iri kukosha kunoita mutsauko kumutengi uye nemwedzi wekumirira kuti utore nhau dzichangoburwa kubva kumunyori wako waunofarira isingagamuchirwe iwe paunogona kuzviwana mumaawa makumi maviri nemana.
Tekinoroji inoshandura nzira yedu yekuona chokwadi, zvishuwo zvedu, maitiro edu uye zvatinoda.
Nyika inochinja, mabhizinesi anochinja, asi neimwe nzira kana imwe, mabhuku anoramba achisvika kudzimba dzeSpanish uye nhau dzakanaka ndedzekuti kudyiwa kwemabhuku kwakawedzera mugore rapfuura zvinoenderana nenhamba dzekutengesa dzechikamu chekutsikisa.
Círculo de Lectores ichaenderera, kwenguva iyo, senge online yekutengesa chikuva, ichikwikwidza neiyo nyowani online zvitoro zvemabhuku.
Kunyangwe isu vaverengi tichiramba kuverenga manhamba (iro bhuku redhijitari raingomiririra 5% yekutengesa mabhuku kuSpain muna 2018), chokwadi ndechekuti, zvichidikanwa kana kwete nekuda kwemakore ayo Circle yanga ichigovera nyaya mudzimba dzeSpanish, kugoverwa mabhuku ari mungoro yekutengera inoita kunge, mune ino nzanga yedhijitari, mufananidzo wekurangarira. Vintage sezvaungazotaura munguva dzino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Sarai zvakanaka kuCírculo deLectores, mushure memakumi matanhatu emakore achiunza mabhuku kudzimba dzeSpanish.
Knife, naJo Nesbø. Harry Hole negehena rake chairo